Adesua a Yɛyɛ No Nnawɔtwe No Mu Ho Akwankyerɛ
KENKAN WƆ Abkhaz Acholi Afrikaans Ahanta Aja Albanian Altai Alur Amharic Arabic Armenian Assamese Ateso Attié Aukan Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Baoule Bashkir Basque Bassa (Cameroon) Batak (Toba) Belize Kriol Bengali Bicol Bislama Boulou Bulgarian Bété Cakchiquel (Western) Cambodian Catalan Cebuano Changana (Mozambique) Chavacano Chichewa Chin (Hakha) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Chokwe Chol Chopi Chuabo Cibemba Cinamwanga Cinyanja Croatian Czech Dangme Danish Digor Douala Dutch Edo Efik English Ewe Fante Fijian Finnish Fon Frafra French Ga Galician Garifuna Georgian German German Sign Language Greek Greenlandic Guarani Gujarati Gun Haitian Creole Hebrew Hiligaynon Hindi Hungarian Iban Ibanag Icelandic Igbo Iloko Indonesian Isoko Italian Japanese Kabiye Kabuverdianu Kachin Karen (S'gaw) Kazakh Kekchi Kikamba Kikaonde Kikongo Kiluba Kimbundu Kirghiz Kiribati Kirundi Kisonge Kongo Korean Kwangali Kwanyama Latvian Lhukonzo Lingala Lithuanian Lolo Lomwe Low German Luganda Lunda Luo Luvale Macedonian Macua Malagasy Malay Malayalam Maltese Mam Mambwe-Lungu Manyawa Marathi Mauritian Creole Maya Mazatec (Huautla) Mbunda Miskito Mixe (North Central) Mixtec (Guerrero) Mizo Mongolian Moore Myanmar Nahuatl (Central) Nahuatl (Guerrero) Nahuatl (Northern Puebla) Ndau Ndebele Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Nepali Ngabere Ngangela Norwegian Nyaneka Nyungwe Nzema Odia Okpe Oromo Ossetian Otetela Otomi (Mezquital Valley) Pangasinan Papiamento (Curaçao) Persian Polish Portuguese Portuguese (Portugal) Punjabi Quechua (Bolivia) Quiche Quichua (Chimborazo) Quichua (Imbabura) Rarotongan Romanian Romany (Serbia) Ronga Russian Samoan Sango Sena Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Sesotho (South Africa) Seychelles Creole Shona Sidama Silozi Sinhala Slovak Slovenian Solomon Islands Pidgin Spanish Sranantongo Swahili Swahili (Congo) Swedish Tahitian Tajiki Tamil Tandroy Tankarana Tarascan Tatar Telugu Tetun Dili Thai Tigrinya Tiv Tlapanec Tojolabal Tongan Totonac Tshwa Tsonga Tswana Turkish Twi Tzeltal Tzotzil Uighur (Cyrillic) Ukrainian Urdu Urhobo Uruund Uzbek Valencian Venda Vezo Vietnamese Waray-Waray Wayuunaiki Xhosa Yacouba Zande Zapotec (Isthmus) Zapotec (Lachiguiri) Zulu
Kristofo Abrabɔ Ne Yɛn Asɛnka Adesua​—Ɛho Akwankyerɛ
Nsɛm a Wɔde Wie
Bere a Ɔmansin Sohwɛfo Abɛsra Asafo No
Bere a Asafo No Rekɔ Ɔmansin Anaa Ɔmantam Nhyiam
Nnawɔtwe a Yɛbɛyɛ Nkaedi No
Abrabɔ Ne Asɛnka Adesua Sohwɛfo
Abrabɔ Ne Asɛnka Adesua Guamtenani
Mpanyimfo Ntam Nkitahodifo
Asa a Ɛto So Mmienu Anaa Mmiɛnsa
1. Akwankyerɛ a ɛwɔ ha yi ne nea ɛwɔ Abrabɔ Ne Asɛnka Adesua Nhoma no mu no, ɛno so na yɛbɛhwɛ ayɛ Abrabɔ Ne Asɛnka Adesua no. Monhyɛ adawurubɔfo nyinaa nkuran ma wɔmfa wɔn ho nhyɛ asuafo dwumadi no mu na wɔnyɛ bi. Wɔn a wɔnyɛ adawurubɔfo nanso wɔde wɔn ho abɔ asafo no denneennen no, sɛ wogye nea Bible kyerɛkyerɛ no tom, na wɔbɔ wɔn bra sɛ Kristofo a, mubetumi ama wɔn dwumadi.​—be kr. 282.
2. Nnianim Nsɛm: Simma 3 anaa nea ennu saa. Nnawɔtwe biara sɛ yɛto dwom bɔ mpae wie a, Abrabɔ Ne Asɛnka Adesua guamtenani no bɛka nsɛm a ɛbɛma anuanom de anigye ahwɛ dwumadi a ɛrebɛkɔ so no kwan. Asɛmmisa a ɛwɔ Abrabɔ Ne Asɛnka Adesua​—Mmuae Krataa mu no, ɔbɛtwe adwene asi so.
3. Bible Mu Akorade:
Ɔkasa: Simma 10. Yɛde asɛmti ne nsɛmpɔw mmienu anaa mmiɛnsa bɛba Abrabɔ Ne Asɛnka Adesua Nhoma no mu. Ɛsɛ sɛ wɔde dwumadi yi ma asafo mu panyin anaa ɔsomfo a ɔfata. Sɛ yɛrebefi Bible nhoma foforo ase wɔ nnawɔtwe Bible akenkan no mu a, yebedi kan ahwɛ ho video. Ɔkasafo no betumi afa video no mu nsɛm bi aka. Nanso, ɔkasa no ho nsɛmpɔw a ɛwɔ adesua nhoma no mu no, ɛsɛ sɛ ɔka ne nyinaa ho asɛm. Afei nso, mfoni ne kyerɛwnsɛm a ɛwɔ adesua nhoma no mu a wɔayɛ sɛ wɔmfa nka nsɛmpɔw no ho no, ɛsɛ sɛ ɔka ho asɛm sɛnea bere bɛma kwan.
Tweetwee Bible Mu: Simma 8. Wei yɛ nsɛmmisa ne mmuae; nnianim ne awiei nsɛm nka ho. Ɛsɛ sɛ wɔde ma asafo mu panyin anaa ɔsomfo a ɔfata. Nea ɔreyɛ dwumadi no betumi akyekyɛ bere no mu ama nsɛmmisa nnan no, nanso nea ɛfa asafo no ho pa ara na ɔbɛma no bere kɛse. Ɛsɛ sɛ obisa atiefo no nsɛm nnan no nyinaa. Afei nso obetumi ahwɛ kyerɛwnsɛm a wɔaka ho asɛm wɔ nsɛmmisa a edi kan ne nea ɛto so mmienu no mu ahwɛ sɛ ehia sɛ wɔkenkan ne nyinaa anaa. Wɔn a wɔbɛma mmuae no wɔ anibu 30 anaa nea ennu saa.
Bible Akenkan: Simma 4 anaa nea ennu saa. Ɛsɛ sɛ onuabarima na ɔyɛ asuafo dwumadi yi. Ɔbɛkenkan nea wɔde ama no no nko ara; ɛnsɛ sɛ ɔka asɛm foforo biara fi ase anaa ɔde wie. Ɛsɛ sɛ adesua no guamtenani no de si n’ani so sɛ ɔbɛboa asuafo no ama wɔn akenkan no mu ada hɔ na akɔ yɔɔ. Bio nso, oguamtenani no bɛhwɛ sɛ wɔbɛkenkan nsɛm no pɛpɛɛpɛ, wɔbɛsakrasakra wɔn nne mu, wobesi nsɛntitiriw so dua, wɔbɛhome wɔ baabi a ɛfata, na wɔde wɔn ankasa nne akenkan.
4. Ma W’ani Nku Asɛnka Ho: Simma 15 anaa nea ennu saa. Wɔayɛ ɔfã yi sɛ ɛbɛma obiara akwannya a ɔde bɛbobɔ nsɛm a ɔbɛka wɔ asɛnka mu no so, na aboa ma yɛatu mpɔn wɔ asɛnka ne ɔkyerɛkyerɛ adwuma no mu. Ɛsɛ sɛ asuafo a wɔbɛyɛ nsrahwɛ a edi kan ne sankɔhwɛ ahorow no de wɔn nsɛm no gyina nea yebetumi aka wɔ asɛnka mu a ɛwɔ Abrabɔ Ne Asɛnka Adesua Nhoma no kratafa a edi kan no so. Adawurubɔfo no pɛ a, wobetumi ahwɛ Nnwinnade Titiriw a Yɛde Kyerɛkyerɛ no mu aka nhoma anaa video bi ho asɛm. Abrabɔ Ne Asɛnka Adesua Nhoma no bɛkyerɛ bere dodow a ɛsɛ sɛ wɔde yɛ asuafo dwumadi no mu biara. Ɛtɔ da nso a, wɔde akwankyerɛ foforo bɛma wɔ nhoma no mu. Sɛ asuafo no te nka sɛ bere a wɔde ama wɔn no bi bɛka mpo a, ɛnsɛ sɛ wɔde nsɛm foforo keka wɔn dwumadi no ho. Ebetumi aba sɛ osuani a wasiesie ne dwumadi yiye mpo betumi ayɛ ne dwumadi no ama simma baako anaa nea ɛboro saa aka. Sɛ ɛho behia a, wobetumi ama mpanyimfo no asuafo dwumadi no bi.
Nea Yebetumi Aka Wɔ Asɛnka Mu Ho Video: Nnawɔtwe biara wɔ bosome no mu no, yɛbɛhwɛ nea yebetumi aka wɔ asɛnka mu ho video baako, na yɛasusuw ho. Yɛbɛhwɛ nsrahwɛ a edi kan, sankɔhwɛ a edi kan, ne sankɔhwɛ a ɛto so mmienu ho video ahorow. Abrabɔ Ne Asɛnka Adesua guamtenani no na ɔbɛyɛ dwumadi yi.
Nsrahwɛ a Edi Kan: Onua anaa onuawa betumi ayɛ dwumadi yi. Sɛ ɔbarima na ɔbɛyɛ a, ɛnsɛ sɛ ne boafo no yɛ ɔbea, gye sɛ ɔyɛ ne busuani. Ɔbea nso na ɔbɛyɛ a, ɛnsɛ sɛ ne boafo no yɛ ɔbarima, gye sɛ ɔyɛ ne busuani. Osuani no ne ne boafo betumi atena ase anaa wɔagyina hɔ. Ɛsɛ sɛ osuani no kyia sɛnea moyɛ wɔ mo hɔnom no. Ɛsɛ sɛ ɔde ne nsɛm no gyina nea yebetumi aka wɔ asɛnka mu no so.
Sankɔhwɛ a Edi Kan: Onua anaa onuawa betumi ayɛ dwumadi yi. Sɛ ɔbarima na ɔbɛyɛ a, ɛnsɛ sɛ ne boafo no yɛ ɔbea; ɔbea nso na ɔbɛyɛ a, ɛnsɛ sɛ ne boafo no yɛ ɔbarima. (km 5/97 kr. 2) Osuani no ne ne boafo no betumi atena ase anaa wɔagyina hɔ. Ɛsɛ sɛ osuani no yɛ dwumadi no te sɛ nea ɔresan akɔsra obi a wadi kan akyerɛ asɛm no ho anigye wɔ nsrahwɛ a edi kan no mu. Ɛsɛ sɛ ɔde ne nsɛm no gyina nea yebetumi aka wɔ asɛnka mu a ɛwɔ Abrabɔ Ne Asɛnka Adesua Nhoma no so.
Sankɔhwɛ a Ɛto So Mmienu: Onua anaa onuawa betumi ayɛ dwumadi yi. Sɛ ɔbarima na ɔbɛyɛ a, ɛnsɛ sɛ ne boafo no yɛ ɔbea; ɔbea nso na ɔbɛyɛ a, ɛnsɛ sɛ ne boafo no yɛ ɔbarima. (km 5/97 kr. 2) Osuani no ne ne boafo betumi atena ase anaa wɔagyina hɔ. Ɛsɛ sɛ osuani no yɛ dwumadi no te sɛ nea ɔresan akɔsra obi a ɔsan kyerɛɛ asɛm no ho anigye wɔ sankɔhwɛ a edi kan no mu. Ɛsɛ sɛ ɔde ne nsɛm no gyina nea yebetumi aka wɔ asɛnka mu a ɛwɔ Abrabɔ Ne Asɛnka Adesua Nhoma no so.
Bible Adesua: Onua anaa onuawa betumi ayɛ dwumadi yi. Sɛ ɔbarima na ɔbɛyɛ a, ɛnsɛ sɛ ne boafo no yɛ ɔbea; ɔbea nso na ɔbɛyɛ a, ɛnsɛ sɛ ne boafo no yɛ ɔbarima. ( km 5/97 kr. 2) Osuani no ne ne boafo betumi atena ase anaa wɔagyina hɔ. Ɛsɛ sɛ wɔyɛ dwumadi no te sɛ Bible adesua a ɛrekɔ so dedaw. Ɛho nhia sɛ wɔde nnianim nsɛm befi ase anaa wɔde nsɛm bi bewie, gye sɛ ɛho akwankyerɛ no kyerɛ saa. Ɛho nhia sɛ wɔbɛkenkan nkyekyɛm a wɔde reyɛ adesua no nyinaa den, nanso wɔpɛ a, wobetumi ayɛ saa. Nea ɛsɛ sɛ ɔma ɛho hia no ne sɛnea ɔbɛkyerɛkyerɛ ama atu mpɔn.
Ɔkasa: Onuabarima na ɔbɛyɛ dwumadi yi, na ɛsɛ sɛ ɔma no sɛ ɔkasa kyerɛ asafo no.
5. Kristofo Abrabɔ: Sɛ yɛto dwom wie a, yɛde simma 15 a edi hɔ no bɛyɛ dwumadi baako anaa mmienu wɔ saa fã yi mu. Wɔayɛ ɔfã yi sɛnea ɛbɛboa atiefo ma wɔde nea wɔresua wɔ Onyankopɔn Asɛm mu no abɔ wɔn bra. Sɛ wɔamfa ho akwankyerɛ foforo biara amma a, ɛsɛ sɛ wɔde ɔfã yi ma asafo mu panyin anaa ɔsomfo a ɔfata. Nanso sɛ dwumadi no yɛ asafo mu ahiade a, ɛnde ɛsɛ sɛ asafo mu panyin yɛ.
Asafo Bible Adesua: Simma 30. Ɛsɛ sɛ wɔde ma ɔpanyin a ɔfata. (Asafo a mpanyimfo nnɔɔso wom no, wobetumi ama asafo mu asomfo a wɔfata ahwɛ so.) Mpanyimfo kuw no na wɔbɛpaw anuanom a wɔfata sɛ wɔhwɛ Asafo Bible Adesua no so. Ɛsɛ sɛ mpanyimfo no paw wɔn a wobetumi ahwɛ adesua no so yiye na wɔadi wɔn bere so. Afei ɛsɛ sɛ wɔn a wɔbɛhwɛ so si kyerɛwsɛm atitiriw a ɛwɔ adesua no mu so dua na wɔboa atiefo ma wohu sɛnea wɔde adesua no mu nsɛm bɛyɛ adwuma. Akwankyerɛ a asafo de ama a ɛkyerɛ sɛnea wɔhwɛ Ɔwɛn-Aban Adesua so no, sɛ wɔn a wɔbɛyɛ saa dwumadi yi kenkan a, wobetumi anya nyansahyɛ a ɛbɛboa wɔn ama wɔahwɛ adesua no so yiye. Sɛ ɛbɛyɛ yiye a, nnawɔtwe biara ɔpanyin foforo nhwɛ adesua no so, na akenkanfo no nso, monsesa mu. Sɛ Abrabɔ Ne Asɛnka Adesua guamtenani no ka sɛ ehia sɛ wotwitwa adesua yi so a, ɛnde ɛsɛ sɛ nea ɔrehwɛ ɔfã yi so no hwɛ ɔkwan a ɔbɛfa so atwitwa so. Ɔpɛ a, ɔremma wɔnkenkan nkyekyɛm ahorow no bi.
6. Nsɛm a Wɔde Wie: Simma 3 anaa nea ennu saa. Abrabɔ Ne Asɛnka Adesua guamtenani no betĩ adesua no mu nsɛntitiriw a ebetumi aboa asafo no. Afei obetĩ asɛmmisa ne mmuae a ɛwɔ Abrabɔ Ne Asɛnka Adesua​—Mmuae Krataa no mu. Owie a, ɛsɛ sɛ ɔka nea yebesua nnawɔtwe a edi hɔ no ho asɛm kakra. Obetumi abisa asɛm bi a yebesusuw ho nnawɔtwe a edi hɔ no. Sɛ bere wom a, oguamtenani no betumi abobɔ asuafo a wɔwɔ dwumadi nnawɔtwe a edi hɔ no din. Sɛ wɔamfa akwankyerɛ foforo biara amma a, saa bere yi na ɛsɛ sɛ oguamtenani no kenkan krataa anaa nkaebɔ biara a ɛho hia kyerɛ asafo no. Nneɛma bi a wɔyɛ no daa te sɛ asɛnka ho nhyehyɛe ne Ahenni Asa so asiesie de, ɛnsɛ sɛ wɔde ho nkaebɔ ma, mmom ɛsɛ sɛ wɔde bɔ amanneɛbɔ pon no so. Sɛ nkaebɔ anaa krataa bi a ɛsɛ sɛ wɔkenkan mu nsɛm dɔɔso a, ɛnde ɛsɛ sɛ oguamtenani no ka kyerɛ anuanom a wɔbɛyɛ Kristofo Abrabɔ dwumadi no ma wɔtetew wɔn bere so. (Hwɛ nkyekyɛm 5 ne 9.) Yɛde dwom ne mpaebɔ bewie adesua no.
7. Ma W’ani Nku Akenkan Ne Ɔkyerɛkyerɛ Ho: Efi January 7, 2019 rekɔ no, ɛsɛ sɛ Abrabɔ Ne Asɛnka Adesua guamtenani no gyina Ɔkyerɛkyerɛ nhomawa no so de afotu ne nkamfo ma asuafo no. Wɔde nea ɛsɛ sɛ osuani biara di ho dwuma wɔ ne dwumadi mu no bɛhyɛ nkahyemde “()” mu wɔ Abrabɔ Ne Asɛnka Adesua Nhoma no mu. Ɛsɛ sɛ osuani biara hwɛ ne dwumadi no ho asuade na ɔyɛ no pɛpɛɛpɛ. Nnawɔtwe a edi kan wɔ bosome biara mu no, Abrabɔ Ne Asɛnka Adesua guamtenani no ne atiefo no besusuw asuade baako ho wɔ Ɔkyerɛkyerɛ nhomawa no mu. Ɔfã a yɛato din “Kyerɛw Nea Woatumi Ayɛ” a ɛwɔ nhomawa no mu no, wɔyɛ maa osuani no sɛ ɛmmoa no na onhu ne nkɔso, wɔanyɛ amma oguamtenani no.
8. Afotu: Sɛ osuani biara wie ne dwumadi a, Abrabɔ Ne Asɛnka Adesua guamtenani no bɛhwɛ Ɔkyerɛkyerɛ nhomawa no mu de nkamfo ne afotu ama no. Ɔde bɛyɛ simma baako na ɛbɛyɛ saa. Sɛ oguamtenani no reto nsa afrɛ osuani bi a, ɔrenka nea wɔrehwehwɛ afi ne hɔ. Nanso owie a, oguamtenani no bɛkamfo no na ebia wakyerɛ nea wɔrehwehwɛ afi ne hɔ. Afei obetumi akyerɛ nea enti a osuani no bɔɔ mmɔden wɔ nea wɔrehwehwɛ afi ne hɔ no mu, anaa nea enti a ɛsɛ sɛ otu mpɔn wɔ saa ɔfã no mu. Sɛ oguamtenani no huu biribi wɔ ɔyɛkyerɛ no mu a ebetumi aboa osuani no anaa atiefo no a, obetumi aka ho asɛm. Oguamtenani no betumi ahwɛ Ɔkyerɛkyerɛ nhomawa no anaa Ɔsom Sukuu nhoma no mu de afotu foforo ama osuani no wɔ kokoam bere a moapɔn adesua no anaa bere foforo. Afotu no betumi afa asuade a na ɔredi ho dwuma no anaa asuade foforo ho.​—Hwɛ nkyekyɛm 13 ne 16, na wubenya adwuma a Abrabɔ Ne Asɛnka sohwɛfo ne ɔfotufo boafo yɛ no ho nsɛm pii.
9. Bere: Ɛnsɛ sɛ oguamtenani no anaa obiara ma bere a wɔde ama no no pa ho. Sɛ osuani bi bere sõ a, ɛsɛ sɛ oguamtenani no fa nyansakwan so ma otwa so. Sɛ wɔn a wɔreyɛ dwumadi afoforo no bi bere pa ho a, ɛsɛ sɛ ɔfotufo boafo no ne wɔn ka ho asɛm wɔ kokoam. Nhyiam no nyinaa yɛ dɔnhwerew 1 ne simma 45. Nnwom ne mpaebɔ nyinaa ka ho.
10. Bere a Ɔmansin Sohwɛfo Abɛsra Asafo No: Sɛ ɔmansin sohwɛfo bɛsra asafo no a, mobɛyɛ dwumadi a ɛwɔ Abrabɔ Ne Asɛnka Adesua Nhoma no mu nyinaa, gye Asafo Bible Adesua no nko ara. Wɔde ɔmansin sohwɛfo kasa no besi Asafo Bible Adesua no ananmu; ɛbɛyɛ simma 30. Ansa na ɔmansin sohwɛfo no bɛma ne kasa no, Abrabɔ Ne Asɛnka Adesua guamtenani no betĩ adesua no mu na waka nea yebesua nnawɔtwe a edi hɔ no ho asɛm kakra. Sɛ nkaebɔ anaa krataa bi wɔ hɔ a, obetumi akenkan, owie a ɔbɛto nsa afrɛ ɔmansin sohwɛfo no. Sɛ ɔmansin sohwɛfo no ma ne kasa no wie a, ɔbɛma asafo no ato dwom de awie dwumadi no nyinaa; ɔno ara na ɔbɛpaw dwom no. Sɛ ɔmansin sohwɛfo no bɛsra asafo no a, ɛnsɛ sɛ wɔyɛ dwumadi biara wɔ asa foforo no so. Nanso sɛ kuw bi a ɛka kasa foforo ka asafo no ho a, wɔn de, wobetumi ahyia ayɛ wɔn adesua no bere mpo a ɔmansin sohwɛfo aba. Sɛ kuw no wie wɔn adesua no a, ɛsɛ sɛ wɔsan kɔka asafo no ho kotie ɔmansin sohwɛfo kasa no bi.
11. Bere a Asafo No Rekɔ Ɔmansin Anaa Ɔmantam Nhyiam: Nnawɔtwe a asafo no bɛkɔ ɔmansin anaa ɔmantam nhyiam no de, wɔrenkɔ adesua. Ɛsɛ sɛ mmusua ne ankorankoro sua saa nnawɔtwe no dwumadi wɔ fie.
12. Nnawɔtwe a Yɛbɛyɛ Nkaedi No: Sɛ Nkaedi da no si Dwoda kosi Fida a, ɛnde wɔrenyɛ Abrabɔ Ne Asɛnka Adesua saa nnawɔtwe no. Nanso, ɛsɛ sɛ wɔyɛ asɛnka nhyiam da a yɛbɛyɛ Nkaedi no.
13. Abrabɔ Ne Asɛnka Adesua Sohwɛfo: Mpanyimfo kuw no na wɔbɛpaw ɔpanyin a ɔbɛyɛ Abrabɔ Ne Asɛnka Adesua sohwɛfo no. Ɔbɛhwɛ sɛ adesua no bɛkɔ so pɛpɛɛpɛ sɛnea ɛho akwankyerɛ te. Ɛsɛ sɛ ɔne ɔfotufo boafo no di nkitaho. Sɛ Abrabɔ Ne Asɛnka Adesua Nhoma foforo nya ba pɛ a, Abrabɔ Ne Asɛnka Adesua sohwɛfo no bɛhyehyɛ saa bosome no asuafo dwumadi no. (Hwɛ nkyekyɛm 4.) Ɛsɛ sɛ adesua sohwɛfo no ma osuani biara nsa ka ne dwumadi anyɛ yiye koraa nnawɔtwe mmiɛnsa ansa na dwumadi no adu so. Ɔde osuani biara dwumadi bɛhyɛ Kristofo Abrabɔ Ne Yɛn Asɛnka Adesua​—Dwumadi Krataa (S-89) no so.
14. Abrabɔ Ne Asɛnka Adesua Guamtenani: Nnawɔtwe biara, asafo mu panyin baako bɛyɛ oguamtenani wɔ Abrabɔ Ne Asɛnka Adesua no ase. (Baabi a asafo mu mpanyimfo nnɔɔso no, ɛtɔ da a wobetumi ama asafo mu somfo a ɔfata ayɛ oguamtenani.) Oguamtenani no na ɔde nnianim nsɛm bebue adesua no ano na ɔde adesua no aba awiei. Nea yebetumi aka wɔ asɛnka mu ho video biara a yɛbɛhwɛ no, oguamtenani no na ɔbɛhwɛ ama yɛasusuw ho. Bio nso, video a yɛde befi adesua asɛm a ɛwɔ Ɔkyerɛkyerɛ nhomawa no mu ase no, oguamtenani no ara na ɔbɛhwɛ ama yɛasusuw ho. Afei ɔno na ɔbɛto nsa afrɛ wɔn a wɔwɔ dwumadi no nyinaa. Sɛ asafo mu mpanyimfo no nnɔɔso nso a, obetumi ayɛ dwumadi ahorow no bi. Sɛ wowie dwumadi biara a, ɛsɛ sɛ nsɛm a oguamtenani no bɛka no yɛ ntiantiaa. Mpanyimfo kuw no na wɔbɛpaw mpanyimfo a wɔfata saa hokwan yi. Wɔbɛyɛ nhyehyɛe ama mpanyimfo a wɔapaw wɔn no mu biara ayɛ oguamtenani bere ne bere mu. Sɛnea nneɛma te wɔ asafo no mu na wobegyina so ahwɛ sɛ ebia wɔbɛma Abrabɔ Ne Asɛnka Adesua sohwɛfo no ayɛ oguamtenani mpɛn pii asen mpanyimfo a aka a wɔfata no. Sɛ ɔpanyin bi fata sɛ ɔhwɛ Asafo Bible Adesua so a, ɛnde ebia obetumi ayɛ oguamtenani nso. Yɛsrɛ mo monhyɛ no nsow sɛ, ɔpanyin a ɔbɛyɛ oguamtenani no, ɛsɛ sɛ oyi ne yam de nkamfo ne afotu a ɛfata ma asuafo no. Ɔno nso na ɔbɛhwɛ sɛ wobewie adesua no bere ano. (Hwɛ nkyekyɛm 6 ne 9.) Sɛ ɔkwan da asɛnka agua no so na oguamtenani no pɛ a, obetumi ama wɔde akasam (microphone) foforo asi hɔ ama wagyina ho. Ɛhɔ na obegyina afrɛfrɛ wɔn a wɔwɔ dwumadi no bere a ɔkasafo no nso gyina akasam a ɔde bɛyɛ ne dwumadi no anim. Sɛ ɔpɛ nso a, obetumi atena pon ho bere a osuani a odi kan rekenkan Bible no ne bere a wɔreyɛ Ma W’ani Nku Asɛnka Ho dwumadi ahorow no. Wei betumi aboa na moansɛe bere.
15. Mpanyimfo Ntam Nkitahodifo: Mpanyimfo ntam nkitahodifo no na ɔbɛhyehyɛ dwumadi no nyinaa, gye asuafo dwumadi no. Sɛ mpanyimfo kuw no nya kyerɛ wɔn a wɔbɛyɛ oguamtenani adwuma no wie a, ɛyɛ mpanyimfo ntam nkitahodifo no na ɔbɛhyehyɛ ama obiara ahu nnawɔtwe a ɔbɛyɛ ne dwumadi no. Ɛsɛ sɛ mpanyimfo ntam nkitahodifo no ne Abrabɔ Ne Asɛnka Adesua sohwɛfo no di nsawɔso na ɔde nnawɔtwe biara dwumadi no ho nhyehyɛe bɔ amanneɛbɔ pon no so.
16. Ɔfotufo Boafo: Ɛyɛ papa sɛ wɔde saa hokwan yi ma asafo mu panyin a otumi kyerɛkyerɛ yiye. Ɔfotufo boafo no adwuma ne sɛ ɔde afotu bɛma asafo mu mpanyimfo ne asomfo wɔ kokoam. Enti sɛ anuanom a wɔwɔ dwumadi a edidi so yi bi hia afotu a, ɔfotufo boafo no bɛhwɛ adi ho dwuma: Wɔn a wɔbɛyɛ dwumadi wɔ Abrabɔ Ne Asɛnka Adesua mu, wɔn a wɔbɛma baguam ɔkasa, wɔn a wɔbɛhwɛ Ɔwɛn-Aban Adesua anaa Asafo Bible Adesua so ne akenkanfo no. (Hwɛ nkyekyɛm 9.) Sɛ mpanyimfo a wotumi kyerɛkyerɛ yiye no dɔɔso wɔ asafo no mu a, ɛnde afe biara mubetumi asesa mu ama ɔpanyin foforo ayɛ ɔfotufo boafo. Ɛho nhia sɛ dwumadi biara a asafo mu mpanyimfo anaa asomfo bɛyɛ no, ɔfotufo boafo no ka ho asɛm.
17. Asa a Ɛto So Mmienu Anaa Mmiɛnsa: Sɛ asuafo no dɔɔso na mowɔ asa foforo a, mubetumi ayɛ asuafo dwumadi no bi wɔ hɔ. Asa foforo biara a wɔbɛyɛ dwumadi no bi wɔ so no, ­wɔbɛpaw ɔpanyin a ɔfata na ɔde afotu ama asuafo no. Sɛ tebea bi nti ɔsomfo a ɔfata wɔ hɔ a, ­wobetumi ama wahwɛ so. Mpanyimfo kuw no na wɔbɛpaw wɔn a wɔbɛhwɛ dwumadi a wɔbɛyɛ no asa foforo no so. Mpanyimfo kuw no ara nso na wɔbɛkyerɛ sɛ wɔbɛsesa mu nnawɔtwe biara, anaa ɔbaakofo no ara na ɔbɛyɛ. Ɛsɛ sɛ nea ɔbɛhwɛ so wɔ asa foforo no so no de akwankyerɛ a ɛwɔ nkyekyɛm 8 no yɛ adwuma. Sɛ moyɛ dwumadi no bi wɔ asa foforo no so a, ɛnde bere a moawie Bible Mu Akorade afã a ɛne Tweetwee Bible Mu no, asuafo no bɛkɔ asa foforo no so. Afei sɛ moyɛ Ma W’ani Nku Asɛnka Ho no wie a, asuafo no bɛsan aba asa a edi kan no so. Sɛ wɔreyi nea yebetumi aka wɔ asɛnka mu ho video no a, anuanom a wɔwɔ asa foforo no so no betumi atena hɔ ara ahwɛ anaa wɔatie dwumadi no bi. Sɛ ɛrenyɛ yiye a, ɛnde onua a ɔrehwɛ dwumadi no so wɔ asa foforo no so no mfa fon, tablɛt, anaa laptop (mobile device) nyi video no na wonsusuw ho.
18. Video Ahorow: Wobeyi video ahorow wɔ adesua yi ase. Wɔde video a wobeyi no nnawɔtwe biara no bɛto JW Library so, na obiara betumi atwe bi. Sɛ yɛhwɛ nea yebetumi aka wɔ asɛnka mu ho video wɔ Abrabɔ Ne Asɛnka Adesua ase wie a, ɛtɔ da a mubetumi ayi wɔ asɛnka nhyiam ase.
Text Baabi a wubetumi atwe nneɛma akenkan Kristofo Abrabɔ ne Yɛn Asɛnka Adesua—Ɛho Akwankyerɛ
Kristofo Abrabɔ ne Yɛn Asɛnka Adesua—Ɛho Akwankyerɛ